Romafo 14 NA-TWI - Mmu atɛn - Munnye obi a ne gyidi sua - Bible Gateway
Romafo 13Romafo 15
Romafo 14 Nkwa Asem (NA-TWI)
14 Munnye obi a ne gyidi sua mfra mo mu; mo ne no nnnye nea n’adwene kyerɛ no no ho akyinnye. 2 Obi gyidi ma otumi di biribiara, nanso obi a ne gyidi sua no di afumduan nkutoo. 3 Ɛnsɛ sɛ nea odi biribiara no bu nea onni biribiara no animtia; saa ara nso na ɛnsɛ sɛ obi a odi afumduan nko ara no bu nea odi biribiara no atɛn; efisɛ, Onyankopɔn agye no. 4 Wo ne hena a wubu obi somfo atɛn? Ɛyɛ ɔno ankasa ne wura na ɔbɛka se wadi nkonim anaasɛ wadi nkogu. Na obedi nkonim no, efisɛ, Awurade betumi ama wadi nkonim.